PressReader - Isolezwe: 2018-11-09 - Iseyinkinga eyemishanguzo yomdlavuza
Iseyinkinga eyemishanguzo yomdlavuza
KUSOLAKALA ukuthi seziqale phansi izinkinga zokulashwa komdlavuza esibhedlela saseThekwini, i-Addington.
Kuthiwa ukushoda kwemishanguzo ethile yokwelapha umdlavuza kungenzeka kube nomthelela ekulashweni kwawo.
Okhulumela iDA kwezempilo, uDkt Imran Keeka uthe bakhathazekile ngesimo esikhona kulesi sibhedlela njengoba ethe bathole ukuthi kushoda imishanguzo ebalulekile ekulashweni kwemidlavuza, okubalwa kuyo owebele.
Uthe eminye imishanguzo kuthiwa ayikho nhlobo. Imishanguzo athe kuthiwa ayikho, i-etoposide esetshenziselwa ukwelapha imidlavuza ehlukene, i-paclitaxel okuwumshanguzo osetshenziselwa ukwelapha umdlavuza webele.
Umshanguzo i-docetaxel esetshenziselwa ukwelapha imidlavuza ehlukene kuthiwa yona iyashoda.
“Okunye okubi kakhulu ukuthi iziguli eziqalayo kudingeka zilinde izinyanga eziyisithupha ukuze zithole usizo lokwelashwa ngeradiation njengoba kubhaliswa (abazothola usizo) ngoFebhruwari. Kufanele baphinde balinde inyanga ukuze bayohlolwa nge-scan, baphinde balinde enye inyanga ngaphambi kokuthi baqale ukwelashwa,” kusho uKeeka.
Uthe okunye okubakhathazayo ukuthi omunye wodokotela abathathu abayingxenye yodokotela beWits Consortium abasesibhedlela Inkosi Albert Luthuli Central uhambile ekupheleni kuka-Okthoba. Okunye akubalulile ukuthi ukwelashwa komdlavuza nakusona lesi sibhedlela akukho ezingeni okufanele engabe lukukona.
UKeeka uthe akukwazi ukuthi uNgqongqoshe wezeMpilo eKZN, uDkt Sibongiseni Dhlomo angathi izingane ziyayithola imishanguzo. Uthe kungenzeka ukuthi unamanga noma abasebenzi bakhe bamqambela amanga.
Uthe bazophinda bathinte inhlangano elwela amalungelo abantu, iSouth African Human Rights Commission bayibikele ngalesi simo esibucayi.
Uthe bazobhalela noNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi njengoba ethe kuyacaca ukuthi akanalo ulwazi oluphelele ngokwenzeka kulesi sifundazwe mayelana nokwelashwa komdlavuza.
Isihlobo sesiguli esicele ukuthi igama laso ligodlwe sithe unina akanayo imishanguzo yomdlavuza i-anastrazole okuyimishanguzo esetshenziselwa ukwelapha umdlavuza.
UNkk Lorraine Govender ongumgqugquzeli weCancer Association of South Africa uthe batholile esibhedlela ukuthi bekunenkinga yemishanguzo ethile kodwa le nkinga ingenxa yokushoda kwaleyo mishanguzo kwababahlinzeka ngemishanguzo.
Uthe lesi simo siyakhathaza kodwa abakubikeliwe ukuthi iziguli azizange ziphazamiseke ngoba zinikwe ezinye izinhlobo zemishanguzo. Uthe bayazwelana neziguli ezithintekile zagcina zinikwa ezinye izinhlobo zemishanguzo.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNksz Ncumisa Mafunda uthe ukushoda kwemithi ye-chemotherapy kungenxa yezingqinamba ezibhekene nenkampani ezimele okufanele ihlinzeke uzwelonke ngaleli khambi.
Ukuqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukusebenza futhi nezimpilo zabantu azibekeki engcupheni ngenxa yalokhu, uhulumeni uphezu kwemizamo yokusebenzisa ezinye izindlela zokuthola leli khambi.
Uthe nokushiya kukadokotela we-oncology weWits Health Consortium, akusona isimanga.
“Basebathathu odokotela be-oncology futhi baqhuba umsebenzi ngendlela efanele.
Ezibhedlela e-Addington, Grey’s, Ngwelezane naseQueen Nandi umsebenzi wokuhlenga abantu abanomdlavuza uyaqhubeka,” kusho uNksz Mafunda.